Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Shirkii Kooxda ANDM oo Lagu Kala Kacay.
Deg Deg: Shirkii Kooxda ANDM oo Lagu Kala Kacay.
Posted by Dulmane	/ January 28, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in lagu kala kacay shirkii kooxda ANDM uga socday magaalada Bahardar, kadib markii amaanka goobta lagu shirayay ay faraha kabixi gaadhay.
Sida xogta aan kuhelayno shirka ayaa gabi ahaanba istaagay kadib markii ergadii shirka fadhiday ay kukala aragti duwanaadeen qaabka loowajahayo howlaha urur kusheega horyaala, waxaana lasheegayaa in bilawgiiba ay kooxdu ukala jabtay labo garab oo waawayn.
Shirkan oo furmay maalin nimadii daraato ayaa lagu waday in uu socdo mudo 4 bari ah, waxaana ladoonayay in laga soo saaro go’aamo wada qanciya xubnaha ANDM ee shirka kasoo qayb galay, hase yeeshee arinta ayaa mar qudh ah cirka isku shareertay kadib markii xubnihii shirka fadhiyay ay bilaabeen in ay is eedeeyaan.
Kooxda TPLF oo shirkan faraha kula jirta ayaa iyadu dabada kariixaysa mooshin xilka lagaga qaadayo xubno amarkooda diiday kuwaas oo ay kujiraan rag xilal sare kahaya kooxda sheegata in ay matasho qoomiyada Axmaarada ee ANDM.
Dhinaca kale waxaa kulanka soo xaadiray xubno aad uga soo horjeeda qaab dhaqanka TPLF iyo faragalinta ay ururkooda kuhayso, kuwaas oo soo jeediyay in masiirka shacabka Axmaarada sitoos ah looga wada hadlo xal waarana laga gaadho.
Labadan mabda oo kala ah maan baray iyo maan bilaal ayaa goobta lala yimid waxayna aakhirkii howshu noqotay in gabi ahaanba shirka la joojiyo, mana cada in ay isku soolaaban doonaan iyo in kale. Waa markii ugu horaysay oo shir noocan ah ay ururada EPRDF kumidaysan qabtaan tan iyo markii uu soo dhamaaday shirkii kooxda TPLF ee socday 45ta bari.